Ndivela kwi-Mac kunye ne-iPhone eyiyo egubungela umsitho ka-Epreli | Ndisuka mac
Ngokusengqiqweni, lonke iqela leSoy de Mac kunye neqela le-iPhone lokwenene liyajikela kwakhona ukuze lenze ukugqitywa ngokuthe ngqo nangokungqongqo komsitho we-Apple NgoLwesibini olandelayo, ngo-Epreli 20. Ngaphantsi nje kweeyure ezingama-24 lo msitho wokuqala uqala eCupertino, kumaziko eApple Park kwaye iqela liphela liya kugubungela ngeenkcukacha ezinkulu kwisiteshi sethu seYouTube, iinethiwekhi zentlalo kwaye, ewe, kwiwebhu.
Kule meko, iApple kufuneka ibonise ifayile ye iPads ezintsha kodwa kukho amarhe malunga nokubakho kweMac entsha kunye nee-AirTag. Ukongeza koku, kukwabhengezwa ukuba ubulungu kwiipodcast bunokufika kwaye mhlawumbi ezinye iindaba.
Ukuba awufuni kuphoswa nayiphina into eveliswa ngu-Apple, gcina isithuba kwi-ajenda yakho yangomso NgoLwesibini, ngo-Epreli 20 ngo-19: XNUMX ebusuku eSpain. Unokuwulandela umcimbi kunye nathi, ungagqabaza kwincoko esiya kuba nayo esebenzayo kwiYouTube.
Sinethemba elikhulu ngesi siganeko sokuqala se-Apple sonyaka kwaye sinokuba nezinto ezimangalisayo. Ukuba uyafuna ube nexesha elihle kwaye uhlale nathi le ntetho yokuqala yalo nyaka i-2021 ye-Apple ungathandabuzi ukugcina umngxuma ngaphakathi kwisitishi se-YouTube. Khumbula ukuba uya kuba nazo zonke iindaba kwi-sydemac.com ngalo mzuzu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Izaziso » Ndivela kwi-Mac kunye ne-iPhone eyiyo egubungela umsitho ka-Epreli
Hlela kwakhona kwaye ufihle imenyu yebar kwiMac kunye neBartender 4, ngoku ehambelana neM1